BURMA: Online News & Analysis: Myanmar's food crisis
BURMA: Online News & Analysis
This blog is dedicated to thousands of Burmese people who have been and are being imprisoned,tortured and excuted because they dare to speak the truth.
Myanmar's food crisis
ဆင်းရဲမွဲတေနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာ စစ်အုပ်စုရဲ့ အုပ်ချူပ်မှုအောက်မှာ လူဦးရေ ၆ သန်းကျော်ဟာ အစားအစာပြတ်လတ်မှုနဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ ( FAO) က မနေ့ကထုတ်ဖော် ပြောဆိုသွားပါတယ်။ အများစုဟာ ဆိုင်ကလုံနားဂစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပြီး၊ ချင်းပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာလည်း အစားရေစာပြတ်လတ်မှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။ ဒီနှစ်အတွက် ဆိုင်ကလုံ နားဂစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာ အရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာ တန်ချိန် ၈၅,၀၀၀ လိုအပ်နေပြီး၊ တခြားဒေသတွေ အတွက် အရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာ တန်ချိန် ၁၀၀,၀၀၀ လိုအပ်နေပါတယ်လို့ အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဆိုင်ကလုံနားဂစ် ဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာ လယ်ယာမြေတွေပျက်စီးနေမှု၊ ဓာတ်မြေသြဇာရှားပါးမှု၊ နှင့် ရာသီဥတုဆိုးဝါးနေမှုကြောင့် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု သိသိသာသာကျဆင်းနေတယ်လို့ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ လယ်မြေဧက ၂ သန်း ( ၈၀၀,၀၀၀ ဟတ်တာဧက ) ပျက်စီးခဲ့တာကြောင့် ၈၅ ရာခိုင်နှုန်း စားနပ်ရိက္ခာစုဆောင်းထားမှု ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ ၏ စီးပွားရေးပညာရှင် Cheng Feng နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ ကိုယ်စလှယ်အကြီးအကဲ Chris Kaye က အတည်ပြု ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် လယ်ယာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု ၃၂.၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားတာကြောင့် စားနပ်ရိက္ခာ တန်ချိန် ၁.၉၃ သန်း သာ ဒီနှစ်စောစောပိုင်းမှာ ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ အခြားအကြောင်းကတော့ ဈေးကွက်မှာ ဆန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းမှု နှင့် မြေသြဇာ ဈေးနှုန်းမြင့်မားလာမှု၊ ကြောင့် လယ်သမားတွေကို ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးလာအောင် မဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ အစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
တချို့ ဒေသတွေမှာ ဆိုင်ကလုံနားဂစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတာကြောင့် မျိုးစေ့တွေဟာ အကြိမ်ကြိမ်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြသော်လည်း မအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ အဖွဲ့ မှ စီးပွားရေးပညာရှင် Cheng Feng က အစီရင်ခံစာထဲမှာ ပါရှိတဲ့အတိုင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားပါတယ်။
Posted by Burma Golf Club at 11:34 AM
Global Solidarity Movement in Japan ( 2009)
WE FIGHT WE WIN BLOG မှာ မြန်မာလို ဖတ်ရှု့ နိုင်ပါသည်။
Free Daw Aung San Suu Kyi
Justice for Human Rights in Burma
Boycott Oil Companies: Get Out from Burma
နှလုံးသား နဲ့ ကြားတဲ့ အခါ .. - ဆောင်းတွင်းကိုဖြတ်သန်းချိန်မှာ ရာသီဥတုက ချမ်း .. လေတွေများ တိုက်လိုက်လို့ တုန်ခိုက် သွားပြီဆိုရင် အမြဲတမ်း ပထမဆုံး သတိရတာက ကျမ ရောက်ဖူးခဲ့တဲ့ ထိုင်းမြန်မ...
ဘုရင်မပါတဲ့..စစ်တုရင်ပွဲ - ဒို့ ဟာလေ..စစ်တုရင်ပွဲထဲက..ဘုရင်မ.. အသုံးမကျတဲ့..ဘုရင်ဧကရာဇ် ကို..အသက်ပေး.. ကာကွယ်ဖို့ လက်မနှေးတဲ့..မဟေသီ.. သစ္စာရှိတဲ့..ဒေ၀ီ.. ထက်မြက်တဲ့…ဧကရီစစ်သည်.. သံချပ...
ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း သို့မဟုတ် ခွန်မြလှိုင်
မျိုးသာကီအတွက်.ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်
MTP ဆွေးနွေးဖလှယ်ပွဲ - မေလ ၁ ရက်နေ့ ၂၀၁၃ မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ MTP ဆွေးနွေးဖလှယ်ပွဲကို အကျဉ်းပြောရရင် ၅၀% လောက်သာ ကျေနပ်မှုရပါတယ်။ ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်း ပြောသွားတဲ့အထဲမှာ အကောင်းမြင်မယ်...
Khin Ma Ma Myo's Blog
တောင်အာဖရိက စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ် - နိဒါန်း တောင်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်စဉ်ဟာ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းက နိုင်ငံရေးလေ့လာသူတွေ၊ နိုင်ငံရေးလက်တွေ့ လုပ်ဆောင်နေသူတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှား...
မစ္စတာ ဘင်း၏ အလွဲများ(၂ ) - ကျမတို့ မစ္စဘင်းအကြောင်း တစ်ယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆို ရီမောနေတုန်းမှာပဲ မငယ်ဖုန်းဝင်လာတယ် “နောက်ဆုံးလေယဉ် လူကုန်နေပြီ မတွေ့သေးဘူး” တဲ့ စိတ်ရှည်လက်ရှည် စောင်...
ဘလောဂ့်ရေးခြင်း တနှစ်ပြည့်နှင့် ကရင်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးနယ်မြေသို့ အလည်ရောက်ခြင်း အမှတ်တရ - မိမိ နိုင်ငံ၏ သမိုင်း အား ဘတ် ရှု လေ့လာရ စကောင်း မှန်း မသိသော လူမျိုးသည် အတိတ် က မိမိ ကျူးလွန် ခဲ့ပြီး သော အမှား အယွင်း များကို ထပ်မံ ကျူးလွန် ခြင်း ပြုရန...
Please Donate Freedom for Burma
We need your support for freedom of Burma. Your donation will be used to help our activists inside Burma and to strengthen our underground network. Please be aware that your donation will not be tax-deductible".
We are counting on your leadership and financial support. Please do all you can -- and act as quickly as possible.
Burma: Trapped in Chains
Must Free Child Soldiers in Burma
Japanese Journalist Mr Nagai was cruely killed
THE HIV/AIDS EPIDEMIC IN BURMA
A Report on the Current Status of the HIV/AIDS and Heroin Epidemics, Policy Options, and Policy implications:
OUR HEADS ARE BLOODY, BUT UNBOWED ( FORMER 88 STUDENTS-USA ON REUNION DAY)
USE YOUR LIBERTY TO PROMOTE OURS
Refugee problem needs joint action by governments
Ice storm cuts electricity to more than 1 million
UN:Myanmar faces food crisis because of cyclone +
January (2009) Newsletter by Free Burma Federatio...
Treasury Targets Financial Networks of Key Support...
Changes in Myanmar wanted
Not standing up and being counted on Burma
Understanding new Thai policy towards Burma
US Speech on Burma's 61st Independence Day
A Leading Saffron Monk’s Memoir
2009 New Year
စီးပွားရေးစူနာမီ လှိုင်း ဂယက် နှင့် အတ္တ ဥခွံ ထဲက မြ...
China vs Burma
Burma Golf Club
Junta's U- turn and future Sino-Burma Relation
The junta's electoral gambit
Can the generals continue to resist international pressure?
My Wonderful Trip: The Rise of Asia
A Report on the Current Status of the HIV/AIDS and Heroin Epidemics, Policy Options, and Policy implications
Translat this blog into Japanese/Chinese/Korea/French/German/Russia
Economic Statistics by Country ( 2005)
Economic Staistics by Country ( 2005)
China and the struggle in Burma
Burmese regime needs to be punished
Analysis: The Ineffectual Roles of U.N and ASEAN on Burma
Burma cannot avert undesirable consequences over soaring fuel prices
Burma: Land of political, economic and social depression
Burmaa --afailed state compared to neighbours
Burma's regime: No time frame for democratization process
BURMA: National Convention with 1,300 political prisoners
ASEAN: Globalization vs. the impact of Burma’s political Impasse
Future Sino-Burma relation at risk
Mr. Kofi Annan must visit Burma